ကျွန်မ က ရွှေမင်းသား၊ သူ က စင်းဒရဲလား – Who ? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » ကျွန်မ က ရွှေမင်းသား၊ သူ က စင်းဒရဲလား – Who ?
ကျွန်မ က ရွှေမင်းသား၊ သူ က စင်းဒရဲလား – Who ?
Posted by မြစပဲရိုး on Jun 8, 2012 in Drama, Essays.. | 37 comments
ဒီခေါင်းစဉ် အတိုင်း ရွာထဲ က တစ်ယောက်ကို ရင်ခုန်အောင် လုပ်ပါ့မယ်။
အပျော်သဘော ပေါ့။ ;-)
ကျွန်မ ရွာထဲ မှာ စာတစ်ပုဒ် ကို ၂၀၁၁ စက်တင်ဘာလ ထဲ မှာ စပြီး တင်ခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်မ ရဲ့ မှာ စစချင်းမှတ်ချက် (၃) ခု ရခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်မ ကို မှတ်ချက် ပေးသူတွေ က
မမ က ဒုတိယပေးသူ
မောင်မှော် က တတိယ ပေးသူ
အစ်မ အေး က နဲနဲ လေးကြာတော့ (၄) ယောက် မှတ်ချက်ပေးသူ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
သူတို့ အားလုံး နဲ့ ကျွန်မ ရင်းနှီးချစ်ခင်ခဲ့တယ်။
မမ နဲ့ ကတော့ လူချင်းတောင် တွေ့ဖို့အထိ ကြိုးစားခဲ့တယ်။
ဇာတ်နာ အောင် ပြောရရင်တော့ ကျွန်မ ရဲ့ Post လေးမှာ ပထမ ဆုံး မှတ်ချက် ပေးခဲ့ သူ ကို ကျွန်မ ရှာနေခဲ့မိတယ်။
ကျွန်မ ၂၀၁၂ နှစ်စ ကစပြီး အမာခံရွာသူ စစ်စစ် ဖြစ်ခဲ့ပြီ။
ဒါပေမဲ့ သူ့ ကို ရှာမတွေ့နိုင်ခဲ့ဘူး။ :-(
သူ့မှတ်ချက် လေးက ကျွန်မ Post ကို ပိုပြီး ရုပ်လုံးကြွ စေခဲ့တယ်။
ကျွန်မ ကို ပထဆုံးလက်ကမ်းပေးခဲ့တဲ့ ကျွန်မ ရဲ့ ရွာ့မောင်ကြီး ကို သိချင်ခဲ့တယ်။
ဒါပေမဲ့ ကျွန်မ သူဘယ်သူ ဆိုတာ မသိခဲ့တာ လွန်ခဲ့တဲ့ အပါတ် လောက် က အထိပါဘဲ။
သူ ဟာ ကျွန်မ နဲ့တစ်ချိန်လုံး ကို ကောင်းကောင်း နေရင်းနှီး ခဲ့သူဘဲ။
အခု တော့ စင်းဒရဲလားပုံပြင် ထဲ ကကို ကျွန်မ ရှာနေတဲ့ ရွှေဖိနပ် ပိုင်ရှင် ဘယ်သူ ဆိုတာသိပြီ။
သူ ဘယ်သူလဲ သိချင်ကြလား?
Hint နဲနဲ ပေးမယ် – ;-)
သူက “မီး ချစ်သူ” – တိုက်ရိုက်မဟုတ်
သူက တိရိစ္ဆာန် အသွင် ဆောင်ထားသေး။ (ကြောင် အဖွဲ့ ဝင်များ လုံးဝ မဟုတ်)
ကာလသားများ နဲ့လဲ အဖွဲ့ကျပါ့။
အရင် သိတဲ့သူကို ကြုံတဲ့ တစ်နေ့ မှာ အမှတ်တရလက်ဆောင် ပေးမည်။
အားလုံး မွန်းကျပ် မှု တွေ ကနေ အနဲငယ် ပြေပျောက်စေရန် အတွက် :-)
cinderella & missing shoe
Image From – http://www.thebrunetteshake.com/
အရီးရေ ဖြတ်လမ်းလိုက်ပြီး ပို့စ်အဟောင်းကိုပြန်ရှာတာ ကွန်မကောင်းလို့လားမသိ မရဘူး
ဖြေးဖြေးမန့်ပါ… ကိုရင့် ကားက ဆီစားသက်သာပါတယ် မိုးလေးရဲ့…။
မောင်စည် ရယ် သဘောင်္သီး လုပ်နေပြီး စွတ်ရွပ် ကြွားပစ် လိုက်စမ်းပါဟယ်။
Harrier လေး၊ ဘာလေး ပေါ့။
အဟီး… အရီးလတ်ကလည်း …
တားတားကို ဟာရီယာနဲ့ လာပြီး စ နေတယ်လည်း သူထင်မှာစိုးဒယ်..
မောင်ဂျစ်နဲ့ လာတော့လည်း ရှောင်ပစ်သွားမှာ စိုးဒယ်..
စိုးဒယ်.. စိုးမိတယ်… စိုးထိတ်မိခဲ့တယ်…
ဆိုက်ကားကို ခေါင်းခန်းက တင်ပြီး
တိရိစ္ဆာန် အသွင် ဆောင်..ကိုကြက်ဖင် ထင်ပ
ကာလသားများ နဲ့လဲ အဖွဲ့ကျ..ထန်းရည်ကြိုက်သူကြီး
ဆိုတော့ ကနေ့ပို့စ်တခုမှာ တောက်တဲ့ အကိုက်ခံလိုက်ရသူလို့ မှန်းလိုက်ပါ၏..။
နာမည်ကိုတော့ နောက်တခေါက်ပြန်လာပီး ထုတ်ပြောမယ်.
နို့မို့ ၆ ကျပ်နဲ့ မန့်ရတာ မတန်ဘူးရယ်
အရီးပြောလို့သာ ကျွန်တော်မန့်ခဲ့မှန်း သိတော့တယ်
ကျွန်တော် မေ့နေပြီ အရီးရေ …
မဟုတ်တရုတ်တွေများ မန့်ခဲ့လား မသိပါဘူးဗျာ …
ဘယ်သူလဲ.ဆိုတာ.ပြောပြ ဦးနော် ။
ရွာထဲမှာ လူနဲ့ တိရိစ္တာန်သာတူညီမျှအခွင့်အရေးတွေနဲ့ နေနေကြတာဆိုတော့ ဘာတိရိစ္တာနာမည်လည်း စဉ်းစားလို့မရ။)
သူများသိလို့ ထုတ်ပြောပြီးမှ သံယောင်လိုက်ရင်ကော အမှတ်တရ လက်ဆောင် မပေးချင်ဘူးလား ဟင်င်င်င်င်……
မလတ်တင်တဲ့ ပုံထဲက အမတ်ကြီးလိုမျိုး ရွာထဲက အမတ်ဆိုရင်တော့ သိတယ်။ ;)
ဇဂါးမစပ် တာ့တာ ဗျာ
ကျုပ်တို့အားလုံး ပေးရမယ့်အကြွေးကို ဆပ်တဲ့အချိန်လောက်ပေါ့
ပန်းသပြေ နဲ့ ကြိုနေပါ့မယ်။
တနလာင်္နာမ် ဖြင့်စသော်လည်း ကြက်ဖမဟုတ်၊
ကဘချော ကို အားကျ လို့သာ လိုက်ပြီး လုပ်ပါတယ်။ သိပ်ပြီး လုံမယ် မထင်၊ မရ ရင် ထပ် Hint ပေးပါ့မယ် ;-)
ငှက်ကြီးများလား အရီးရယ် ..
ငှက်ကြီး က တနလာင်္နာမ် အစ မဟုတ်။
သြော်…”မီး ချစ်သူ” ဆိုတော့ ‘ပိုးဖလံ’ ဒါမှမဟုတ် ‘ဦးရဲ့မီး’ ဒါမှမဟုတ် ‘မီးရဲ့ဦး’ လို့ထင်တာပဲ။
မီး က သူ့ကို ကြိုက်တာတဲ့။
ကျွန်တော်သိပြီ အရီး ..
မီးချစ်တာ တစ်ခုပဲ တူတယ် ..
တနင်္လာ နံလဲ မဟုတ်ပဲနဲ့ ..
အဲဒါ အရီး သိချင်ခဲ့တဲ့ မေးခွန်း ဘဲ။
မြန်ပြည်သား က ဘယ်သူလဲ ဆိုတာ လိုတာလေ မောင်မှော်။ :-)
ဟုတ်တယ်နော် … အရီး
မောင်မှော် တော့ နောက် တစ်ဆု ရ ပြန်ပြီ။
အဲဒါ “ကိုကြီးမိုက်” ပါဘဲ။ :-)
နင့်ဆီ သင်ဒန်း လာတက်ဦးမယ်..
ကျွန်မ ရဲ့ ပထမဆုံး Post
ဒါ ကျွန်မ ပထမဆုံး ရခဲ့တဲ့ ကိုကြီးမိုက် ရဲ့ မှတ်ချက် :-)
အရီးက ပထမဆုံး ပိုစ့်တင်တဲ့ ခုနှစ်နဲ့ လကို ဟင့် ပေးလိုက်တာကိုး …
နာမည်အ၇တော့ ဘယ်လိုမှ ရှာမရဘူး …
ဒီတော့ ခုနှစ်နဲ့ လကို အခြေခံပြီး ကျွန်တော် ပြက္ခဒိန်လှန်ပြီး အရီးပိုစ့်ကို ပြန်ရှာလိုက်တာပေါ့ .. ဟီ ဟိ
မှန်တာပြောရရင် မလတ်စပြီးရွာထဲဝင်ချိန်က စာမေးပွဲနီးလို့ ရွာကိုအဆက်ဖြတ်ထားချိန်ဆိုတော့ မသိလိုက်ဘူး။
ဒီဇင်ဘာ စာမေးပွဲပြီးမှ မမက ခင်လတ်ဆိုတာ ကောင်းတယ်ဖတ်ကြည့်လို့ ညွှန်းတော့ မလတ်ရဲ့ BC comment တွေဘဲ ဖတ်မိတော့တယ်။
စာအမောတွေကြားက ပြုံးခွင့်ရလိုက်လို့ ကျေးကျေးပါ မလတ်နဲ့ မှော် ဖေဖေကြီး
အစ်မပပဒုမ္မာ ကို “တကယ်မချစ်လို့စွန့်ရစ်လေရော့သလား” အတွဲကြီး နဲ့ တလေးတစား သိနေတာ။
ဝင်သာ မမန့်တာ။ စိတ်ထဲမှာ ခင် နေတာ။
နှစ်ဆန်း တော့ မှ အစ်မ က တရားစာလေး နဲ့ ပြန်ဝင်လာတာ။
ရှေးရေစက် ဆိုတာ အတော်ဆန်းသား ကလား။
ကိုပေါက် ပြောသလို လေထဲ က သံယောဇဉ် တွေပေါ့။ :-)
အောင်မယ်လေးမြန်ချက်တော်။ သများတို့ကအခုမှအရီးပိုစ့်ကို အစကပြန်ရှာနေတုန်း။ အရီးလတ် ကြိုးစားရှာ တဲ့ သူတွေကောနှစ်သိမ့်ဆုမရဘူးလား။
ရမယ်၊ ရမယ်။ သဲနု ရေ။
စာရင်းတို့ ထားတယ်။ :-)
ကျနော်လဲ အားမှဝင်ဖတ် မန်းချင်မှမန်းဆိုတဲ့ အကျင့်ကိုဖျောက်ရတော့မယ်ထင်တာဘဲ။
ဟယ် ၁၀ က နေ ခြောက်ကျပ်ဖြစ်သွားပြန်ပလား။
သဂျီး စိတ်ညစ်ရုံမက မျက်ခုံးနှစ်ဘက် လုံး အသကုန် လှုပ်နေလောက်ဘီ
၆ ကျပ် ဆိုတော့လဲ ၆ ကျပ်ပေါ့
လာထား အာဘွား ၆ ကျပ်
စာကိုဖတ်ပြီး ပြီးရော ဖတ်ခဲ့မိတဲ့အတွက် ဘာမှ မမှတ်မိတော့ပါဘူးခင်ဗျ ။
ကိုယ်ရေးတဲ့စာတောင် ကိုယ်ပြန်မှတ်မိပါ့မလား မသိဘူး ။
သဂျီးက ကျုပ်ပို့စ်မှာတင် လန့်သွားဒါဖြစ်မှာ ..
လာထား တစ်ဆယ် ဆိုတာဒွေချည်းပဲ ..
ခုဒေါ့ ၆ ကျပ် …
ကျုပ်က အဲ့ပိုက်ပိုက်လောက်ကို မမက် .. (လဂါး ပြောဒါ)
ကျနော် နောက်ကျသွားဒယ်ဂျာ …
အစောကတည်းက ဒီပို့စ်ကို ဖတ်မိရမှာ ..
ခုဒေါ့ .. ခုဒေါ့ .. လွဲရပြန်ပြီပေါ့လို့ … ဟီးးးရွှတ် …
အရီးလတ် ၀င်လာတဲ.အချိန်မှာ ကျွန်တော်ကရွာပြင်ခဏရောက်နေခဲ.တယ် ။
ပြန်ဝင်လာတော.မှ တအံ.တသြတွေ.ရတာ ….။
ကိုခင်လတ်က ကျုပ်မရှိတုံး ကျုပ်အကြောင်းတွေဖွနေတာပေါ့လေ..
ကျုပ်မှာတော့ ခုတလော အလုပ်ထဲ အထက်လူဂျီးနဲ့ အဆင်မပြေ
အလုပ်ကစွတ်များ…ဆိုတော့ ဂေဇက်တောင် ကောင်းကောင်းမဖတ်ဖြစ်ဘူး
ခုတလော ဂေဇက်မှာလည်း လူမျိုးရေး ဘာသာရေး..လှုံ့ဆော်ပို့စ်တွေများနေလို့
ပရို ဓါတ်ပုံဆရာ ကမှော် ကိုလည်းချီးကျူးတယ်ဗျို့..
ကိုခင်လတ်ပို့စ် မှာမန့်ခဲ့တုံးက ကျုပ်ဂေဇက်စ၀င်ခဲ့တဲ့နာမည်
ဒီတော့ ရှုပ်ကုန်မှာစိုးတာနဲ့ နာမည်ပြောင်းလိုက်တာပါ။
ကျုပ်ကလည်း ဗိုလ်ချုပ် ခရေဇီ ဆိုပါတော့..
ဒါကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်အကြောင်းများဆိုရင် သိပီးသားတွေဖြစ်ပေမဲ့
ဖတ်ရင်အမြဲ ခံစားရတုံးဘဲ…ဒီစကားလေးတော့ ဆိုင်းဘုတ်ကြီးကြီးရေးပီး
မြို့တိုင်း ရွာတိုင်း ထောင်ထားချင်တာ..
ညွှန်းထားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်စကားလေးကို ကြိုက်သဗျ..
အဟိ..၆ကျပ် ပလိစ် သဂျီးမင်း